Dare reDzimhosva Rotanga Kunzwa Nyaya Iri Kupomerwa VaMadzore
Chikumi 04, 2012
Mapurisa arova nhengo dzeMDC inotungamirwa naVa Morgan Tsvangirai padare repamusoro muHarare neMuvhuro pakutanga kutongwa kwemhosva iri kupomerwa mutungamiri weboka revechidiki mubato iri, Va Solomon Madzore, nevamwe vavo makumi maviri nevasere.
Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa mumusha we Glen-View gore rapera, asi vari kuramba mhosva iyi.
Vechidiki veMDC vanga vachidarika makumi mashanu vaungana pamusuwo wedare repamusoro ndokutanga kuratidzira vakatakura chinyorwa chihombe changa chine mufananidzo waVaMadzore pamwe nemazita evanhu vose vari kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa, Va Petros Mutedza.
Mushure memaminitsi anokwana makumi matatu, mapurisa anga akapakatira zvombo abva asvika ndokutanga kurova vanga vachiratidzira ava pamwe nekukanda hutsi hunokachidza.
Munyori muboka revechidiki muMDC, VaPromise Mkwananzi, vati kuratidza kwaitwa nenhengo dzebato ravo kwanga kwakanangana nekuti VaMadzore nevamwe vavo vabuditswe muhusungwa vachiti vasungwa ava havana mhosva yavakapara.
Vaenderera mberi vachiti chinovarwadza ndechekuti nhengo dze Zanu PF dzakapara mhosva dzakaomarara dzinongofamba mumigwagwa pasina zvadziri kuitwa asi vatsigiri veMDC vachitambiswa chamutavanhava nemapurisa.
Va Madzore nevamwe vavo vose varamba mhosva yekuponda Va Mutedza pamwe nekukonzera mhirizhonga vachiti havana chavanoziva nezvenyaya iyi, asi kuti mapurisa ndiwo ari kungovashungurudza.
Rimwe remagweta evasungwa ava, Va Charles Kwaramba, vatsinhira zvataurwa nevasungwa ava.
Va Kwaramba vaudzawo dare kuti vanhu vakasungwa ava inhengo dzeMDC dzinozivikanwa kuti dzine zvinzvimbo mumusangano uye vati izvi zvakaitirwa kuti isakwanise kufambisa basa rayo zvakanaka kwete kuti vasungwa ava vane mhosva yavakapara.
Mutongi wedare, VaChinembiri Bhunu, vati nyaya iyi idzoke mudare neChipiri apo pakatarisirwa kuti magweta evasungwa ava awedzere mashoko pachikumbiro chavakaita chekuti vasungwa ava vaburitswe muhusungwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso.
Va Bhunu vakambenge vamira kupa mutongo wavo vachiti vanoda kutanga vaona mapepa ane zviri kutaurwa nevasungwa panyaya iyi, kana kuti defence outline, ayo averengwa ese.